တရုတ်နိုင်ငံသည် Delta ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း CNN က ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
နယူးယောက် ၊ ဩဂုတ် ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဇူလိုင်လမှစ၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဩဂုတ် ၂၃ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်မှု မတွေ့ရှိရကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တင်းကျပ်သော zero-COVID-19 ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းနှင့်အတူ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း နှင့် အဓိက Delta ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း CNN သတင်းဌာနက ဩဂုတ် ၂၃ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။မကြာသေးမီက Delta ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု လုံးဝ အဖြစ်မခံနိုင်သော မူဝါဒအတွက် အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်နေသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဒေသတွင်းတာဝန်ရှိသူများက တင်းကြပ်သည့် lockdown ချမှတ်ခြင်း ၊ ပမာဏများပြားသော စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေခြင်း ၊ ခြေရာခံလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းခရီးသွားလာခြင်းများအား ကန့်သတ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းစူးပြည်နယ် မြို့တော် နန်ကျင်းမြို့ နန်ကျင်းရထားဘူတာရုံ၌ ဩဂုတ် ၂၃ ရက်တွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ တင်းကြပ်သည့် အစီအမံများသည် အလုပ်ဖြစ်ပုံရကြောင်း CNN က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော အပတ်တွင် နေ့စဉ် ရောဂါကူးစက်မှုများသည် ခုဂဏန်း အထိ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာကြောင်း ၊ ပြီးခဲ့သော သီတင်းနှစ်ပတ်က အမြင့်ဆုံး ကူးစက်မှု ၁၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ရာမှ အောက်သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဩဂုတ် ၂၃ ရက်တွင် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသူများမှ ကူးစက်သူ ၂၁ ဦး နှင့် ပြည်တွင်း၌ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိခဲ့ဘဲ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှ စ၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်သူ လုံးဝမရှိသည်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတွင်း ရောက်ရှိလာသူများအတွက် တင်းကြပ်သည့် quarantine အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ပစ်မှတ်ထား lockdown ချမှတ်မျုများ နှင့် ကာကွယ်မှုများမှတစ်ဆင့် လျော့ကျသွားနိုင်မည့် မည်သည့် ဖြစ်ပွားမှုမဆို တားဆီးရန် တက်ကြွထက်သန်စွာ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ခြေရာခံခြင်း မူဝါဒများအား စတင်ခဲ့ကြောင်း CNN က ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအစီအမံများသည် ဖြစ်ပွားမှုများ သုညနီးပါး ထိန်းသိမ်းရာတွင် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်ကာလက အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်ဟုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ (Xinhua)
NEW YORK, Aug. 24 (Xinhua) — China scoredavictory with its stringent zero-COVID-19 approach, as no new locally transmitted COVID-19 cases were reported on Monday nationwide for the first time since July, and it “could become the world’s first country to controlamajor Delta outbreak,” CNN reported on Monday.
The Delta outbreak recently has been “the biggest challenge yet to China’s uncompromising zero tolerance virus policy,” it said. Local authorities responded by imposing strict lockdown, conducting massive testing and tracing campaigns, and restricting domestic travels.
“The strict measures appeared to be working,” said CNN. Daily infections have fallen steadily over the past week into single digits, down from more than 100 from its peak two weeks ago. China on Monday reported 21 imported cases and zero locally transmitted symptomatic infections, the first time no local cases have been recorded since July 16.
China imposed strict quarantines for arrivals and launched targeted lockdowns and aggressive testing and tracing policies to stamp out any cases that slipped through the defenses, it said, adding that “for more thanayear, these measures had been largely successful in keeping cases close to zero.” Enditem
Photo 1 – A student receivesadose of COVID-19 vaccine atavaccination site in Yinchuan, capital city of northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, Aug. 18, 2021. (Xinhua/Feng Kaihua)
Photo2– A staff member disinfects at Nanjing Railway Station in Nanjing, capital of east China’s Jiangsu Province, Aug. 23, 2021. (Xinhua/Ji Chunpeng)
တန်ချိန် ၃၈,၀၀၀ အလေးချိန်ရှိကြိုးတံတားကြီးအား နာရီလက်တံအတိုင်းလှည့်လည်တပ်ဆင်ခြင်း